Malaysia Oo Diidday In Ay Hindiya U Gacan Geliso Wadaad Caan Ah - Waadinews | Somali News and Entertainments
Ra’iisal wasaaraha dalka Malaysia ayaa Maxammed Mahatir ayaa sheegay in Sheekha weyn ee reer Hindiya uu xaq u leeyahay in uu degenaado Malaysia Ilaa inta uu dalkiisa Hindiya ku helayo maxkamad caddaalad ah. Mahatir ayaa sheegay ” In Zakir Naik uu aaminsan yahay in aan marnaba si caddaalad ah loogu maxkamadaynaynin Hindiya gudaheeda.
Dr. Zakir Naik ayaa waqti xaadirkan degan dalka Malaysia oo uu ka helay degannaasho joogto ah kaddib markii ay Hindiya ku eedaysay tuhunno la xidhiidha lacag-maydhis iyo in uu dalka ku faafiyo khudbado ay karaahiyo ku dheehan tahay, balse sheekha ayaa ku dooday in aanu marnba Jabin sharciga Hidniya.
Si kastaba ha ahaatee, dawladda Malaysia ayaa diidday in ay mustaafuriso Zakir Naik, iyada oo ra’iisal wasaaraheedu mar sii horraysay sheegay in aanu dalkiisu dhag u dhigi doonin baaqyada waddamada kale. Mahatiir ayaa Sannadkii 2018 sheegay in Malaysia ay u kuur-galayso dhammaan arrimaha la xidhiidh Zakir Naik ka hor inta ayna go’aan gaadhin. Xukuumadda Hindiya ayaa sannadkii 2017 baasaaboorkii kala noqotay Zakir Naik iyada oo sheegtay in ay taasi ku timid codsi ka yimid sirdoonka dalkaas.
Related Topics:HindiyaMahatir MaxammedMalaysianewsZakir Naik
Dalka Hindiya ayaa waayey lacag 43 million oo dollar ilaa bishii February markii diyaaradeheega ka duula New Delhi